« XULSHADA TOGAHERER IYO MAANTA WAA MAANSADII ANUUN BAA HOOYADAA AH
JIRRIDA MURANKA AWOODEED EE SOMALILAND »
ISBAHAYSIGA QABAAILKA S/LAND WAY BADBAADIN KARAAN QARANIMADA IYO GOONI ISU TAAGA S/LAND
Hadalkaas oo Suldaan ugu Mug weyn salaadiinta beesha dhexe ka dhawaajiyey. Waxa hadalkaas jawaab kala duwan ka bixiyey madax dhaqameedyo iyo masuuliyiin sare oo ka tirsan asxaabta, dawladda iyo golayaasha qaranka. Jawaabahaasi waxa ay iskugu jireen kuwo dhaliilaya hadalka sudaanka iyo ujeedadiisaba, kuwo soo dhaweynaya iyo kuwo meel dhexe ka istaagay oo ku tilmaamay inaan weli la gaadhin waxyaabaha uu suldaanku ka digayo.
Haddaba, hadalka uu suldaanku yidhi waxan ku soo koobayaa sidan:
“Waxa beelaha Garxajis iskugu tagay 11 beelood oo S/Land ah mar aan isku deynay inaan xukuumadda ka hor nimaadno. Haddaba haday cidi isku daydo inay xukuumadda sifo aan sharci aheyn ku dumiso waan iskugu tageynaa inta yada kale(Beelaha kale) si aan ubadbaadino S/land iyo xukuumadaba”. Inkastoo hadalka Suldaanku dheeraa hadana nuxurkiisu intaas ayuu ahaa.
Haddaba, hadalkaas waxa uu xambaarsanyahay nuxur iyo ujeedo ka fog sida dadka inta badani uturjiunteen, Waayo dadka qaarkood waxay u qaateen inuu Suldaanku leeyahay waaan arsandoona markan haday cidi isdhaqaajiso khalad iyo saxba, oo ay ka hortimaado xukuumadda. Taas aayaana keentay dood badan oo dalka gudihiisa iyo dibadiisaba ka dhacda oo ku saabsan hadlkan suldaanka.
Haddaba, Suldaanku maanta ayuu mar kale hadalkii uu isku dayey inuu bayaamiyo ujeedadiisa oo uu shirjaraaid qabtay.
Waxana uu dhaliilay kuwa hadalkiisii docwareemay ee leexayey ujeedadadisii. Waxa haddaba hadalka suldaanka markii aan dhageystay aan ka dhadhansaday in wax hibata ah iyo wax aargoosi ah oo cid uu ula jeeday aanay jirin qabiil iyo xisbina midnaba, balse ujeedadu ay aheyd in cidii isku deyda inay dawlad la’aan ka dhigto S/Land in la raaci doono sifihii hore ee la adeegsaday ee qaranka lagu badbaadiyey. Taasoo uu qirayo in ay wakhtigaa kuwii dawladnimada badbaadiyey ay xaq ku joogeen, maadaama isla sifahaa hore mid la mid ah la raaci doono si loo badbaadiyo S/land jiritaankeeda mar kale hadii uu halis galo. Tasoo imaneysa marka ay cidi iska indha tirto g,oaamada golayaasha qaranka iyo dastuurka wadanka.
Haddaba, ma aha markii u horeysay ee qabaa’ilka Soomaalida ay qaar ka mid ahi dhinaca kasoo wada jeestaan oo ay arin qaldan toosiyaan. Hadaba arintan imiku waxa ay leedahay muhimad gaar ah oo waxay leedahay cidkastoo isku dayda inay dumiso dawladnimada S/Land aan meel uga soo wada jeesano, si qaranka iyo dawladnimadu ujirto. Hadii ujeedadaas mar hore ay midho dhalisay oo ay qarankii badbadisay in imikana digniin lagu siiyo cidii arinkaas khuseeyo aniga waxay ila tahay waa arin Sax ah.
Beelaha inta kolba is raacda ee dawladnimada iyo qaranka badbaadineysaa waxa ay u shaqeeynayaan sidii Mareykanka (American civil war) ee xulafadii 11ka state (11 southern states confederecy) ay diideen dawladii dhexe ee uu hogaaminayey Abraahim Lincon. Tasoo lagu badbaadiyey dawladii dhexe (US Federal Gov.), ka dib markii laga xoog roonaaday 11kii state ama gobol ee diiday awoodda dawladda dhexe.
Haddaba, inkastoo aynaan marxaladaa imika taagneyn oo wada hadal iyo isku tanasul, wax isku dhawrid iyo kala garqaadasho intuba ay socdaan, hadana digniintaasi Suldaanku carabka ku dhuftay waa digiin culus oo ka culus digniinta xataa xukuumadda ay isticmaasho. Waayo dawladnimadeena iyo qarankeenu waxa uu ka koobanyahay beelo iyo qabiilo isku tagay. xukuumadana waxay beeluhu u dhiibteen awoodoodii si ay ugu shaqeyso danahooda.
Markaa hadii beeluhu ay dhinac isku raacaan dawladda awoodoodu way kala soonoqon karaan, waanay badbadinkaraan hadii ay gar leedahay Xukuumaddu.
This entry was posted on April 17, 2009 at 12:59 pm and is filed under 1.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.